Sizezona zilungileyo kwesikwenzayo, kwaye yinkonzo leyo.
IFunlandia inamava eminyaka kunye nobuchule ekuncedeni abathengi ukuba bacwangcise kwaye bayile iiprojekthi zabo ngeyona ndlela inokwenzeka. Oku kubandakanya uhlalutyo lwezinto ezahlukeneyo ezinje ngeemarike, ukhetho lwesiza, amashishini kunye namaqela abasebenzisi.
Sikhetha ezona projekthi zeepaki zokuzonwabisa ezifanelekileyo kunye nezixhobo ezisebenzayo kuwe, kwaye sicwangcise ulungelelwaniso lwendawo eguqukayo kunye nezixhobo zokuma.
IFunlandia ibeka amava omsebenzisi ngaphambili kwaye ikunxibelelwano olusondeleyo nabaxumi ukuyila iikhonsepthi ezinomtsalane. Sithathela ingqalelo iinkcukacha ngokupheleleyo ngenjongo yokucwangcisa umgaqo wokuzuza ixesha elide kwabaxumi bethu.
Imizobo eneenkcukacha iveliswa kwimveliso nganye ukuqinisekisa ukubekwa ngokuchanekileyo kwisithuba kunye nokudityaniswa okugqibeleleyo phakathi kweemveliso naphakathi kweemveliso kunye nendawo yokufumana isiphumo esivumelana ngokupheleleyo nemizobo yoyilo.
Senza i-esthetics ebonakalayo yoyilo lwegraphic esekwe kwizinto ezahlukeneyo ezinemixholo, imibala, njl.njl.
Sibamba umkhwa wempahla yorhwebo, sisebenzisa iikhonsepthi zoyilo kunye nezinto eziphambili zoyilo, kwaye silandele ukungqinelanisa phakathi koyilo lokudlala kunye noyilo lomhlaba ukudala indawo yolonwabo.
Abaphathi beeprojekthi zethu baqinisekisa ukuba izimvo zoyilo ziyalandelwa kwaye ziyalandelwa ngexesha lokuvelisa, ukuvelisa kunye nofakelo. Baqwalasele umxholo kunye nolawulo lomgangatho kuyo yonke imiba ukusuka kwiinkcukacha ukuya kwiikhonsepthi zizonke.
Ilungelo lokushicilela 2010-2021 funlandia.com Onke amalungelo agciniwe. Imveliso eshushuImephu yendawoDlala izixhobo zabantwana abasabhadazayo, Indawo yokudlala ngaphakathi yezixhobo zokudlala, Abaenzi Bendawo Yokudlala, Iindleko zokudlala ngaphakathi kwiNdawo yokuDlala, Ukwenziwa kweTrampoline Park, IBig Air Trampoline Park Franchise,